Taangiyada GFS, Kaydinta Labaaska Membrane Gas, Haanta Kaydinta Gaaska Dulsaaran - Boselan
DAAWEYNTA QALINKA BIYAHA
Taangiyada GFS waxay ka faa’iideysanayaan iska caabinta bilicda wanaagsan, khidmadaha hooseeya, taariikhda dhismaha oo gaaban, shuruud yar oo goobta laga leeyahay, wax qabad dabacsan oo waarta ayaa si ballaaran looga isticmaalaa daaweynta biyaha iyo wasaqda qashinka ee warshadaha, sida haamaha IC, haamaha taangiyada, haamaha wasakhda iyo miyir beelista taangiyada.
Taangiyada BSL waxaa si balaadhan looga isticmaalaa mashruuca biogas adduunka. Waxaa loo istcimaalo barkad sharciyeyn, dheef-shiidka anearobic, dheef-shiidka anaerobic-ka, haanta qashin-karka, haanta keydka ee xawaashka dhirta. Taangiga GFS wuxuu leeyahay faa'iido leh taariikhda iska caabbinta dillaaca, baahida hoose ee goobta, waxqabadka dabacsan oo waara, taasoo ka dhigaysa inay ka sarreeyaan noocyada kale ee taangiyada.
QALBINKA & DABKA DABKA
Taangiyada BSL GFS waxaa loo isticmaali karaa sida haamaha biyaha oo kor loo qaaday, kuwaas oo biyo siiya meelaha la deggan yahay. Isbeddello iyo jilitaan dhismeedka dabacsan, nolosha wareega dheer (in ka badan 30 sano), iska caabin saqaf sare leh iyo kharashka dayactirka oo hooseeya ayaa ka dhigaya doorashada koowaad ee maalgashiga mashruuca. Iyada oo leh qaab-dhismeed wanaagsan, iska caabin heer sare ah oo ka kooban qaybaha iyo qaybaha, ama shaqada xoojinta sare, sida maacuunta jikada, cuntada iyo waxsoosaarka kiimikada iyo qalabka kaydinta
Shirkadeena waxay isticmaashay qalab teknolojiyad cusub ah, qalab iyo mashiinka goynta hillaaca CNC ee laga keenay warshadaha kaydinta Yurub, qaab dhismeedka birta otomatiga ah ee qalabeysan, qolka rinjiga otomaatiga ah, aaladaha garka dheer ee garka, CNC punch, ku takhasusay soosaarka birta birta. Waxaa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo soybean, saliida la cuni karo, lowska bet, hadhuudhka iyo waxyaabaha kale ee beeraha laga isticmaalo. Sannado badan oo horumar ah kadib, waxay noqotay shirkad si weyn caan uga ah GFS oo ah qalabka silos ee Shiinaha iyo dibedda.
Ku soo qaad si aad waxbadan uga ogaato
Dhismaha Taangiga Kaydinta Biyaha ee ...